Fayriska Corona oo culeys weyn ku haya Magaalada Gaalkacyo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Fayriska Corona oo culeys weyn ku haya Magaalada Gaalkacyo
Fayriska Corona oo culeys weyn ku haya Magaalada Gaalkacyo
Wasiirka Caafimaadka Puntland, Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay inay korortay tirada dadka xanuunka COVID-19 ugu geeriyoonaya deegaanada Puntland.
Wasiirka oo Warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay inay aad u kordheen kiisaska laga diiwaangelinayo deegaanada Puntland, gaar ahaan buu yiri magaalooyinka waaweyn.
Wasiirka ayaa xusay inay Magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland tahay goobta ugu daran ee sida weyn uu u saameeyay xanuunka COVID-19 ee fayriska Corona uu keeno, isla-markaana ay tahay goobta uu culeyska ugu badani xilligan ka jiro.
Iyadoo deegaanada Puntland uu ka socdo wejiga hore ee tallaalka COVID-19 ayuu haddana sheegay inaanay dadka waaweyn qaadanayn tallaalkaasi, waana xilli sida uu sheegay ay u nugul yihiin xanuunkaasi.
Jaamac Faarax Xasan, Wasiirka Caafimaadka Puntland ayaa ugu yeeray dadka da’da ahi ee xanuunada kale la nool inay qaataan tallaalka COVID-19.
Wasiirka Caafimaadka ayaa muujiyay in faafitaanka xanuunka looga gudbi karo dadka oo u hoggaansama awaamiirta khubarada caafimaadka ee ah inay qaataan maaska afka lagu xirto, taxadar badan oo dadku muujiyaan, yaraynta kulamada isku imaatinimada iyo qof kastoo calaamadaha xanuunka isku arko oo tagga xarumaha baaritaanada.
Hadalka Wasiir Jaamac ayaa imaanaya, xilli Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Galmudug, Axmed Mire Faafaale uu sheegay in Gaalkacyo ka mid tahay goobaha ugu daran deegaanada Galmudug ay dadka ugu dhimanayaan COVID-19.
Inta badan magaalooyinka dalka ayaa waxaa saameeyay soo kaba kacleynta xanuunka COVID-19, waxaana labadii bilood ee ugu dambeysay ugu geeriyooday boqolaal qof.
Previous articleMilitariga Kenya oo qarax lagula eegtay gudaha dalkaasi
Next articleWasiirka Cadaaladda Zambia oo gaaray Magaalada Hargeysa (SAWIRRO)